कविता प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशन,
प्रथम स्थान हासिल गरे भरत रोकायले सल्यान, १५ असोज । कुमाख दैंनिक पत्रिकाको आयोजनामा भएको लिखित कविता प्रतियोगिताको नतिजा बिहीवार सार्वजनिक गरिएको छ । पत्रिकाले दोस्रो वर्ष पुरा गरी तेस्रो वर्ष प्रवेश गर्दै गरेको अवसरमा आयोजित प्रतियोगिताको शीर्षक कोरानासंग […]
आज हरितालिका तीज पर्व मनाइँदै
सल्यान, ५ भदौँ । भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने हरितालिका तीज पर्व आज महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ । आजको दिन व्रत बसी शिव–पार्वतीको पूजा, उपासना गरेमा सुख, शान्ति र परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ । शिव–पार्वतीको पूजा गरेपछि […]
लोकेश जलन गलज क्षेत्रमा पुुरानै र प्रसिद्ध नाम हो । उहाँले गजलमार्फत समसामयीक सन्दर्भ र समयलाई चिरफार गर्दै आउनुुभएको छ । यस्तो छ उहाँको पछिल्लो गजल । लोकेश जलन गजल सोध्यौ घरमा को – को […]
देशप्रेमले भरिपूर्ण लोकेश जलनको एउटा गजल यहाँ प्रस्तुुत गरेका छौं । जसले नेपाल र नेपालीहरुको अहिलेको यथार्थ अवस्था झल्काउछँ र साथै जन्मभूमिप्रति केहि योगदान गर्नैपर्ने हौसला पनि दिन्छ । हाल देशबाहिरै भए पनि उहाँ निरन्तर स्वदेशकै बारेमा चिन्तन गर्नुहुन्छ । […]
अनलाइन कक्षा – रोल नं. १२ : बत्ती गयो सर !
Milan Timilsina बैशाख २०, २०७७ शनिबार लकडाउनको महिना दिनसम्म सबैलाई ढुक्कै भयो । न हिँड्नुपर्यो, न काम गर्नुपर्यो, न पढ्नु पर्यो, न पढाउनै पर्यो । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबैलाई आनन्द । तर कति दिन यसरी बस्नु ? मोबाइलमा भएका गेम […]
हाइकुमा लोकभाकाको खोजी
दामोदर ढकाल “ दीपक“ नेपालमा आयातीत साहित्यका विधामा बढी नै बहस हुने गरेको पाइन्छ । तर बहस कै बीच त्यो फैलिन्छ यद्यपि आफ्नोपन र विशेषता लिएर । गजल जस्तै हाइकु आयातित विधा हो । तर हाइकु नेपाली भजन, चुट्का र […]
बहार हराएको बसन्त !
सल्यानको कुमाख गाउपालिका वडा नं. ५ कालागाउँमा जन्म भई हाल सदरमुकामा खलंगा निवासी भिम कुमाखी जनवादी कलाकारको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाँ जनसांस्कृतिक महासंघ, कार्णाली प्रदेशका संयोजक पनि हुनुहुन्छ । समाज परिवर्तनको लागि सञ्चालित जनयुद्धका एक सिपाहीको रुपमा पनि चिनिदै […]
12 baishakh, 2077 जागीरे जीवनसंगै आफ्नो साहित्यीक यात्रालाई निरन्तर अगाडि बढाईरहने र धेरैको आँखामा नम्र एबं मिजासिलो स्वभावका एक असल व्यक्ति भनेर पहिचान बनाउन सफल पूर्ण ओलीको कविता यसमा प्रस्तुत गरेका छौं । जागीरे जीवनकै क्रममा यसअघि सल्यानमा पनि काम […]